Wiil Soomaaliyeed oo derbi-jiif ahaa haddana milkiile shirkadeed ah | Berberanews.com
Home Qubanaha Wiil Soomaaliyeed oo derbi-jiif ahaa haddana milkiile shirkadeed ah
Wiil Soomaaliyeed oo derbi-jiif ahaa haddana milkiile shirkadeed ah
Waxyaabaha bulshada soo jiita ee inta badan dhiirra-gelintana u noqda ayaa waxaa ka mid ah isbeddellada dadka qaar ay sameeyaan, gaar ahaanna kuwa marka hore nolosha kala kulma caqabado hoos u dhiga rajada qofka.
Dadkaasi isbeddelka cajiibka ah sameeyay waxaa ka mid ah Cabdinaasir Maxamuud Nuux oo ah wiil dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Hargeysa ee Jamhuuriyadda Iskeed ugu Dhawaaqday Madaxbannaanida ee Somaliland, halkaas oo uu tegay isaga oo yar, iyadoo xilligaas aysan jirin cid uu ka garanayay magaalada.
Wuxuu sheegay in 12 sano jir uu ahaa markii uu magaalada imaanayay, isagoona gabbaad ka dhigan jiray gidaarrada ku yaalla magaalada, maaddaama uusan heysan hoy uu ka galo cadceedda maalinkii iyo dhaxanta habeenkii.
Cabdinaasir oo reer miyi ahaa, ayaa wuxuu xusay in magaalada uu soo galay isagoo raaadinaya ilbaxnimo iyo in uu u arkayay in waxyaabo badan uu ka faa’iidi doono oo ay ugu horreyso waxbarasho, balse nasiib darro ay taas u suura-geli weysay, maaddaama uusan markaas heysan dhaqaalo uu wax ku baran karo iyo reer uu ku soo hagaagayo midna.
Sidee ayuu heerkan u gaaray?
Cabdinaasir, intii uu ku jiray nolosha adag ee derbi jiifnimada, haddana kama uusan rajo dhigin in wax uun uu noloshiisa ku maareyn karo uu qabsado, isagoo sheegay in shaqooyin yar yar uu qabanayay muddadaas, sida in uu ka shaqeeyo hoteellada.
Carruurta derbi jiifka ah oo inta badan la ogyahay in ay isticmaalaan waxyaabaha maanka dooriya, ayaa Cabdinaasir waxa uu sheegay in uusan weligii isticmaalin koolada balse uu isagu khaadka iyo sigaarka isticmaali jiray, iyadoo weliba saaxiibbadiisna ay xabagta iyo koollada dhuuqi jireen.
Cabdinaasir hadda waa aabbe heysta afar carruur ah, waxayna isaga iyo qoyskiisuba ku nool yihiin magaalada Hargeysa oo muddo kahor uu soo galay, noloshii adkeyd iyo duruufihii kala duwanaa ee uu soo maray kaddib, hadda waa milkiilaha shirkad la yiraahdo Al-kheyraad oo kireysa gawaarida takaasida.
Wuxuu sheegay in shirkadda oo uu ku bilaabay hal gaari ay haatan yaallaan ilaa 14-gaari, isagoo noloshiisa ay aad isku beddeshay, kana mid ah ganacsatada magalaada Hargeysa.
Previous articleAbwaan Weedhsame oo su’aallo waydiiyey xukuumadda
Next articleGuddoomiyaha Maxkamadda sare ee Somaliland oo la kulmay safiirka Ingiriiska ee Somalia